Nyaya-Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co, Ltd.
Kugadzirwa kwe ursodeoxycholic acid nekushandisa biological enzyme nzira panzvimbo yemakemikari nzira yakagadziriswa nekambani yedu yakagadzirisa matambudziko ekuchengetedza zvakatipoteredza uye kugadzirwa kwekugadzira kwemutengi wedu Changde Yungang Biotechnology Co, Ltd., iyo yakanyatsovandudza chibereko chechigadzirwa uye mhando, yakaderedzwa. mutengo wekugadzira uye kuwedzera kwehupfumi hwehupfumi. Iyo purojekiti yakagadzirwa.
Kambani yedu yakanyatsobudirira kuona rese rese ramatekinoroji matsva ekutsvaira, kuchenesa uye kusimbisa mapuroteni enzyme kubva kumabhakitiriya akagadzirwa, akaisa hwaro hwakasimba hwegadziriro yeiyo synthesis ye ursodeoxycholic acid ne enzymatic nzira. Izvo zvitsva zvinotevera:
1. Kekutanga, iyo UD yakateedzana enzyme inoiswa kune ursodeoxycholic acid process. Iyo enzymatic synthesis yeursodeoxycholic acid yakagadzirwa nemakemikari ichienzaniswa neyakapfuura. Iyo semi-synthesis nzira ine izvo zvakanakira nyore nzira, yakakwirira kugadzirwa kugadziriswa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza .;
2. Uchishandisa inducer nyowani, sarudza iyo chaiyo yakaringana mvura Fermentation kuti uwane yakakwira enzyme gohwo nekudzidza iyo Fermentation formula;
3. Kutungamira kuunganidzwa kwebhakitiriya enzymes yekugadzira, kurerutsa kutora uye kuchenesa matanho e enzyme, uye kuchengetedza chiitiko cheiyo enzyme nekukwira kwakanyanya.